पवित्र धर्मशास्‍त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो ? – Milappost
येशूले भन्नुभयो, “किनकि जसरी योना ठूलो माछाको पेटभित्र तीन दिन र तीन रात थिए, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्‍वीको गर्भमा तीन दिन र तीन रात रहनेछ” (मत्ती १२:४०) । अर्को ठाउँमा उहाँले भन्नुभयो, “यस मन्‍दिरलाई भत्‍काइदेओ, र म तीन दिनमा यसलाई खड़ा गर्नेछु । … जुन मन्‍दिरको विषयमा उहाँ बोल्‍नुभएको थियो, त्‍यो उहाँको शरीर थियो” (यूहन्ना २:१९-२१) । “पवित्र धर्मशास्‍त्रअनुसार ख्रीष्‍ट हाम्रा पापका निम्‍ति मर्नुभयो । उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्‍त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो” (१ कोरिन्थी १५:३-४) ।
येशू शुक्रबार क्रूसमा टाँगिनुभयो र आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो अर्थात् उहाँ तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो । येशू किन तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो ? उहाँ पहिलो दिन वा दोस्रो दिन वा चौथो दिनमा पनि पुनरुत्थान हुन सक्नुहुन्थ्यो तर किन तेस्रो दिनमा पुन: जीवित हुनुभयो ? यो संयोग थियो वा यसको कुनै अर्थ छ ?
बाइबलमा सङ्ख्याको निकै महत्त्व रहेको छ । ‘तीन’ एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या हो र यसले पूर्णता जाहेर गर्दछ । यो सङ्ख्या बाइबलमा ४६७ पटक प्रयोग गरिएको छ । उहाँको पुनरुत्थानको दिनको ईश्वरशास्त्रीय आशय छ । पुरानो करारमा ‘तेस्रो दिन’ को महत्त्व प्रस्ट छ ।
तेस्रो दिनमा जीवशास्त्रीय जीवन देखा परेको थियो, “… भूमिले वनस्‍पति, बीउ हुने बोटहरू र आफ्‍नो-आफ्‍नो किसिमको बीउ हुने फल फल्‍ने वृक्षहरू उमार्‍यो । अनि परमेश्‍वरले हेर्नुभयो, त्‍यो असल थियो । साँझ पर्‍यो र बिहान भयो— तेस्रो दिन” (उत्पत्ति १:९-१२) ।
तेस्रो दिनमा नै अब्राहाम मोरीयाह डाँडामा आइपुगे जहाँ तिनले आफ्ना पुत्र इसहाकलाई बलिदान गर्ने तयारी गरे, “तेस्रो दिन अब्राहामले हेर्दा टाढ़ामा त्‍यो ठाउँ देखे । तब अब्राहामले आफ्‍ना कमाराहरूलाई भने, ‘तिमीहरू यहीँ गधासँग बस । म र यो केटो ऊ परसम्‍म गएर पूजा गरी तिमीहरूकहाँ फर्केर आउनेछौं’” (उत्पत्ति २२:४-५) ।
योसेफको कथामा तेस्रो दिनमा थुनामुक्त घटेको थियो, “… यसको अर्थ यही हो: तीन हाँगाहरू भनेको तीन दिन हो । तीन दिनभित्रै फारोले तपाईंको शिर ठाड़ो पारिदिनुहुनेछ, र फेरि तपाईंको आफ्‍नो काम दिनुहुनेछ, र तपाईं अघि उहाँका मुख्‍य पियाउने हुनुहुँदाजस्‍तै फेरि फारोको कचौरा उहाँको बाहुलीमा टक्र्याउनुहुनेछ” (उत्पत्ति ४०:१२-१३) ।
परमेश्वरले मोशामार्फत इस्राएलीहरूलाई तयार रहन आज्ञा दिनुभयो किनकि तेस्रो दिनमा उहाँ सीनै पर्वतमा देखा पर्नुहुनेथियो, “मानिसहरूकहाँ गएर तिनीहरूलाई आज र भोलि शुद्ध गर्‌ । तिनीहरूले आफ्‍नाआफ्‍ना लुगा धोऊन्‌, र तेस्रो दिनको निम्‍ति तिनीहरू तयार रहून्‌, किनकि तेस्रो दिन सीनै पर्वतमा सबै मानिसहरूका आँखाकै सामुन्‍ने परमप्रभु आउनुहुनेछ” (प्रस्थान १९:१०-११) ।
परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई तेस्रो दिनमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “आओ, हामी परमप्रभुतिर फर्कौं । उहाँले हामीलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नुभएको छ, तर उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुनेछ । उहाँले चोट पार्नुभएको छ, तर उहाँले हाम्रा चोटहरूमा मलहमपट्टी लाउनुहुनेछ । दुई दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ, तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुन: खड़ा गर्नुहुनेछ, र हामी उहाँकै सामने जीवित रहनेछौं” (होशे ६:१-२) । यो इस्राएलीहरूका निम्ति परमेश्वरको वचन थियो जहाँ तपाईं एउटा क्रम देख्नुहुन्छ र तेस्रो दिनमा तिनीहरू पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुनेथिए ।
योना तेस्रो दिनमा माछाको पेटबाट बाहिर निस्के, “योनालाई निल्‍न परमप्रभुले एउटा ठूलो माछा जुटाउनुभयो, र तीन दिन र तीन रातसम्‍म योना त्‍यस माछाको पेटभित्र रहे” (योना १:१७) ।
आफ्ना चेलाहरूसित आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानबारे चर्चा गर्नुहुँदा येशूले तेस्रो दिनमा उहाँको पुनरुत्थान हुनेथियो भनी बारम्बार भविष्यवाणी गर्नुभयो, “उहाँ कसरी यरूशलेममा जानुपर्छ, र धर्म-गुरु र मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूबाट धेरै कष्‍ट भोग्‍नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भइउठ्‌नुपर्छ भनी उहाँले त्‍यस बेलादेखि आफ्‍ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्‍नुभयो” (मत्ती १६:२१) । वास्तवमा उहाँले ‘तीन दिन’ को धारणालाई २१ पटक उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको यो जोड कुनै संयोग थिएन । येशू तेस्रो दिनबारे दृढ हुनुहुन्थ्यो किनकि यसले नयाँ जीवन सृजना गर्ने परमेश्वरको सुरुआतको प्रतिनिधित्व गर्छ ।